Nepali Christian Bible Study Resources - ख्रीष्टको महान् आज्ञा
» अध्ययन मालाहरू » एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम » ख्रीष्टको महान् आज्ञा
१) यहाँ हामी महान् आज्ञाको अधिकार देख्दछौं (मत्ती २८:१८)। येशूसँग सारा अधिकार छ र जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्दछौं त्यो उहाँकै अधिकारले गर्दछौं। तसर्थ कुनै पनि जाति वा राष्ट्रकहाँ जान र कुनै पनि व्यक्तिलाई उहाँको नाममा सुसमाचार सुनाउन हामीसँग अधिकार छ। "धर्म" भनेको व्यक्तिगत मामिला हो भन्ने सोंच धेरैको छ‍, तर येशूले त सुसमाचारको घोषणालाई हाम्रो जिम्मेवारी नै ठहराउनुभएको छ। बाइबलले बताउँछ कि नयाँ जन्म पाएको प्रत्येक व्यक्ति ख्रीष्टको राजदूत हो (२ कोरिन्थी ५:१७-२०)। हामी उहाँकै नाउँ र अधिकारमा जान्छौं।
पहिलो, हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। "जाओ र … चेला बनाओ" लाई मर्कूस १६:१५ सित तुलना गर्दा यसले सुसमाचार प्रचार गर्ने कामलाई जनाउँदछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौं। प्रत्येक मण्डलीले सुसमाचार प्रचारकहरू पठाउने काम गर्नुपर्छ र साथै मिसनरी (प्रचारक) हरूलाई सहायता गर्नुपर्छ।
तेस्रो, विश्वास गर्नेहरूलाई हामीले चेला बनाउनुपर्छ। कसैले मुक्ति पाएर बप्‍तिस्मा लिएपछि हाम्रो काम समाप्‍त हुँदैन। वास्तवमा त्यो त शुरु मात्र हो। हामीले उनीहरूलाई ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुराहरू सिकाउनुपर्छ। यी आज्ञाहरू पवित्र शास्त्रको नयाँ नियममा छन्। यसो गर्नाले विश्वासीहरू विश्वासमा सुदृढ पारिन्छन् र झूटा शिक्षाहरूबाट जोगाइन्छन्। कुनै-कुनै शिक्षाहरू मात्र "सारभूत" (essential) छन् र बाँकी सारभूत छैनन् (non-essential) भन्ने र विभाजन ल्याउन सक्ने भएकाले तिनलाई जोड दिइनुहुन्न भन्ने व्यापक भूललाई यस खण्डले काट्छ। परमेश्वरका जनहरूलाई हामीले उहाँको वचनको एक-एक भागलाई पालन गर्न र आदर गर्न सिकाउनुपर्छ भनेर येशूले सिकाउनुभयो!
यसले हामीलाई यो बताउँछ कि परमेश्वरले हरेक प्राणलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हरेक प्राणलाई बचाउन चाहनुहुन्छ जुनचाहिँ "सार्वभौम चुनाउ" (sovereign election) भन्ने क्याल्भिनवादी शिक्षाको विपरित छ।
३) बप्‍तिस्मा भनेको मुक्तिपश्चात् मुक्तिको गवाही र प्रमाणस्वरूप लिइने कुरा हो। बप्तिस्मा नलिएकोले प्राण नरकको दोषी हुने होइन तर विश्वास नगरेकोले हो। "जसले विश्वास गर्दैन, त्यो दोषी ठहरिनेछ"। पावलले सिकाए, सुसमाचारले त मुक्ति दिन्छ (रोमी १:१६), तर बप्तिस्मा भनेको सुसमाचार त होइन (१ कोरिन्थी १:१७; १५:१-४)।
३) हाम्रो काम भनेको येशू ख्रीष्टलाई उचाल्नु हो। हामी उहाँका साक्षीहरू हुनुपर्छ। जब हामी मानिसहरूसित परमेश्वरका कुराहरू गर्दछौं त्यसबेला हामीले ख्रीष्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, मण्डली वा "इसाईमत" को बारेमा होइन।
आत्मसमर्पण गरेर - महान् आज्ञा शुरु हुने यहाँबाट हो: "म यहाँ छु; मलाई पठाउनुहोस्! हे प्रभु, म के गरूँ - तपाईं के चाहनुहुन्छ?" हेर्नुहोस् यशैया ६:८; प्रेरित ९:६; रोमी १२:१।
रीष्टसित सङ्गती गरेर - हामी प्रभुसित हिँड्दैनौं भने हामीले उहाँको बुद्धि वा सामर्थ्य वा अगुवाइ पाउनेछैनौं। उहाँको इच्छा पूरा गर्ने हामीसित कुनै चासो पनि हुनेछैन।
वचन सिकेर - हामी उहाँको वचनमा अशिक्षित छौं भने हामी परमेश्वरद्वारा राम्ररी प्रयोग गर्न सकिनेछैनौं। मानिसहरूको प्रश्नका जवाफ दिनलाई हामीले बाइबल सिक्नुपर्छ। प्रभावकारी ढङ्गले साक्षी हुन, प्रार्थना आदि गर्न हामीले सिक्नुपर्छ।
विश्वासयोग्य भएर - मिसनको मुटु भनेको मण्डलीहरू हुन् र मण्डलीहरू बलियो हुन सक्नलाई समर्पित, विश्वासयोग्य सदस्यहरूको खाँचो पर्छ।
प्रार्थना गरेर - महान् आज्ञाको निम्ति चाहिने बुद्धि र सामर्थ्यको स्रोत यही हो। परमेश्वरका जनहरू प्रार्थनामा भिड्ने योद्धाहरू हुनुपर्छ, आफ्‍नै मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्ने, अरू मण्डलीहरूका लागि प्रार्थना गर्ने, मिसनरीहरू, मुक्ति नपाएका नातागोताहरू, मुक्ति नपाएका साथीभाइहरू, पर्चा र व्यक्तिगत साक्षीद्वारा सुसमाचार सुनिरहेकाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेहरू हुनुपर्छ। प्रार्थनाले परिवर्तनहरू ल्याउँदछ। मेरा प्रार्थनाहरूद्वारा कति-कति कुराहरू परिवर्तन हुँदैछन् त?
दिएर - प्रभुको महान् आज्ञा एक बृहत् र खर्चिलो काम हो। के म ख्रीष्टको कामको निम्ति यस्तो प्रकारले दिने गर्दछु कि त्यसले उहाँप्रतिको मेरो प्रेमलाई प्रमाणित गर्दछ र सुसमाचारलाई संसारको अन्तसम्म फैलाउने काम गर्दैछ?
गएर - नयाँ जन्म पाएको परमेश्वरको प्रत्येक सन्तान ख्रीष्टको राजदूत हो र ऊ प्रभुको बारेमा मानिसहरूलाई बताउन व्यस्त हुनुपर्छ, पर्चा बाँडिरहनुपर्छ र मण्डलीको प्रचार कार्यमा नियमित रूपमा सहभागी हुनुपर्छ।
छोराछोरीलाई तालिम दिएर (हितोपदेश २२:६) - छोराछोरीहरू बुद्धिमानी बाबुआमाका ठोक्रोका काँडहरू हुन् जसलाई ख्रीष्टको सेवाको निम्ति तालिम दिइनुपर्छ (भजनसङ्ग्रह १२७:४-५)। ख्रीष्टिय बाबुआमाहरूले आफ्‍ना छोराछोरीहरूलाई यस्तो प्रकारले हुर्काउनुपर्छ ताकि यस जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ख्रीष्ट र उहाँको काम हो भनेर उनीहरूले जानेका हुनेछन्। छोराछोरीहरूले आफ्‍ना बाबुआमाको जीवनमा कस्तो खालको उदाहरण देख्दैछन् त? बाबुआमाले आफ्‍नो छोराछोरीहरूलाई मिसनरी बन्न नियुक्त गर्न त सक्दैनन् किनभने त्यो त परमेश्वरको विशेष बोलावट हो, तर बाबुआमाले गर्न सक्ने भनेको आफ्‍ना छोराछोरीहरूलाई मिसनरी‍-मन भएको हुनलाई तालिम दिन सक्छन्।
संसारबाट अलग भएर - सांसारिकपनले आत्मिक दर्शन र सामर्थ्यलाई नष्ट गर्दछ (१ पत्रुस २:११)।
« ख्रीष्टको न्यायआसन
अलगपनता - नैतिक »